Bilaogy Peroviana vao haingana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2018 3:59 GMT
Amin'ny teny Espaniola ny dika voalohany amin'ity lahatsoratra ity.
Mavitrika tato ho ato ny sehatra ara-politika, satria bilaogera isan-karazany no matetika nandefa ireo zava-nitranga vao haingana ary anisan'ny nanintona ny saiko indrindra nyy nosoratan'i “La Morena” ny kandidan'ny antoko politikan'ny fitondrana: De Guatemala a Guatepeor con los Chakanos izay raha mamaky izany, dia mahita fa, ho an'i Morena, tsy ampy ny maha mpandraharaha mahomby mba ho kandidà tsara. Na izany na tsy izany, manambara mazava tsara ny vaovao farany fa tsy ny zava-drehetra no nodradradradraina, na dia tao amin'ny faritry ny “Perú Posibilistas” aza. Ny olana iray dia tsy feno ny fanehoan-kevitra, saingy afaka mahita azy ireo ato ianao.
Ao amin'ny bilaogy Peruvian Culture, Gustavo Garcia manolotra antsika ny lisitr'ireo kandidà sy izay mety ho kandidà amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena hoavy: “Ensalada de Candidatos in 2006” ary mamarana ny lahatsorany amin'ny “hazakazaka reggaeton” manondro ny fahadalana amin'ny ” Patriotic Fathers (Ray Tia Tanindrazana)”. Ireo bilaogeran'ny Perú Político kosa namoaka famintinana ireo vaovao manan-danja indrindra tamin'ny herinandro lasa: Crónica semanal (30 de noviembre al 6 de diciembre) sy ao amin'ny Página Libre, Fernando CáceresCrónica miresaka momba ny demaokrasia sy ny saranga ara-politika ao amin'ny “El Peru en su propio laberinto (Però ao anatin'ny Fahavalalaniny). Farany, tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “A la Plaza, mitaraina momba ny fanapahan-kevitry ny “Comuna” ao Lima tsy hamela ny Plaza San Martín hampiasaina amin'ny fivoriana ara-politika i Angelo.
Ao amin'ny lafiny hafa ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Peroviana, Ecoperú nanoratra ny olana ara-tontolo iainana vokatry ny fantsona mitondra etona ao Camisea: “Machiguengas vs Camisea. Juan Carlos Luján ao amin'ny Sin Papel, tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “El mensaje que no trascendió en la CADE 2005, dia mampahafantatra antsika ny fampiratiana ao amin'ny CADE 2005 – kaonferansa ho an'ny saranga ara-politika sy ara-pihariana ao Però – avy amin'i León Trahtemberg izay” nahazo tehaka avy amin'ny mpanatrika, tamin'ny fandalinana ny fifandraisana eo amin'ny sehatra ara-tsosialy, ny fanamparam-pahefana any an-tsekoly (izay anona iombonana ny “alaivo tahaka, manehana ry mangina”), ary ireo kandidà izay manintona ny vahoaka amin'ny kabary tsotra tsy nahazo fanontaniana misy fisalasalana.
Avy any an-tanàna atsimo ao Puno, Eland Vera avy ao amin'ny Comunicación y Desarrollo Peru, tamin'ny lahatsoratra “Bilaogeran'i Puno ao amin'ny Oniversitem-panjakana Altiplano, milaza amintsika ny traikefa fampianarany tamin'ny alalan'ny fampiasana bilaogy. Ary, raha miresaka famahanam-bilaogy, Nauta nanoratra ny “Blogs con rostro (Bilaogy ahitana Endrika)” izay mirona amin'ny fisafidianana misy mari-panondroana mihoatra ny tsy fitononana anarana rehefa mibilaogy. FutbolPeruano.com mampahafantatra antsika ny vaovao farany momba ny fanatanjahantena Peroviana tamin'ny lahatsoratra, “Copa Libertadores 2006: Tsy nanome vahana ny ekipa Peroviana ny antsapaka.
Miady hevitra momba ny hetsika mozika, Germán ao amin'ny MusicBlog/M&S manolotra ny fahatsapany momba ny fampisehoana vao haingana nataon'ny vondrona salsa, Niche tamin'ny “Crónica de un concierto anunciado (I) sy (II).Enrike manoratra ao amin'ny Cámara de Gas mizara ny traikefany tamin'ny fampisehoan'ny tarika metaly mavesatra, Napalm Death, tao amin'ny “Napalm Death en Perú” ary avy eo milaza amintsika fa tia an'i Pero sy ny fihetsiny tsara tamin'ilay fampisehoana ny vondrona.
Mifandraika amin'ny kolontsaina, Seycko ao amin'ny Réplica nandefa “Fotos de Magda” momba ny fampisehoana mandeha irery voalohany nataon'ilay mpaka sary Magdalena Sangalli. Juan Carlos Bondy ao amin'ny Lado B mitantara amintsika ny fahataran'ny famoahana ny loka ho an'ny tononkalo sy ny tantara fohy tamin'ny “Winners and Finalists of the 2002 Copé Award (Ireo mpandresy sy Mpifaninana tamin'ny famaranana ny Loka Cope 2002).” Ary Javier Agreda nanoratra momba ny boky vao haingana nosoratan'ilay mpanoratra Peroviana, Luis Hernán Castañeda tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Hotel Europa.”
Tamin'ireo lahatsoratra manokana kokoa, Fernando Lozano nanoratra ny finamanana sy ny maha-Peroviana ao amin'ny “Cuando pienses en volver, Daniel (Rahoviana no mieritreritra hiverina ianao Daniel?).” Ary i Sergio ao amin'ny Idioteca mitantara ny faran'ny herinandrony tao amin'ny “Jiro, Mozika, Labiera, Bilaogera ary Graffiti“. Ary miaraka amin'izany dia amin'ny manaraka indray isika mihaona.
Nadikan'i David Sasaki